सस्तो मूल्यमा आउँदैछ नयाँ मोडलको ‘बुलेट बाइक’ – Dainik Sangalo
September 3, 2020 250
काठमाडौ / बेलायती मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्डको बुलेट बाइक नेपाली बजारमा पनि निकै लोकप्रिय मानिन्छ । भारतीय बजारमा उत्पादन हुँदै आएको रोयल इन्फिल्डका बाइक नै नेपाली बजारमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो क्वार्टरमा भारतमा १९ प्रतिशतले बिक्री गुमाएको कम्पनीले अब भने सस्तो मूल्यका मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ ।कम्पनीको साधारण सभामा बोल्दै नवनियुक्त सीइओ विनोद देसारीले भने ‘हामी नयाँ मोडलका मोटरसाइकल बजारमा ल्याउने तयारीमा छौँ, आगामी महिना हाम्रा ग्राहकलाई सरप्राइजिङ्ग प्याकेज दिने तयारीमा छौँ ।
’देसारीको भनाइलाई आधार बनाउँदै भारतीय मिडियाले कम्पनीले नयाँ सस्तो मोटरसाइकल चाँडै आउने अनुमान गरेका छन् । अहिले रोयल इन्फिल्डको सबैभन्दा सस्तो मोडल बुलेट क्लासिक रहेको छ । अब कम्पनीले त्योभन्दा सस्तो मोडल बजारमा ल्याउन खोजेको हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अहिले बिक्री भइरहेको बुलेटको तुलनमा नयाँ बाइक करिब २५ हजार भारतीय रुपैयाँ सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ ।
Prevकाभ्रेपालन्चोकबाट आयो यस्तो दुख’द खबर ! जेठाजुद्वारा आफ्नै बुहारीको वि’भत्स ह’त्या
Nextरियाको गालामा सिबिआइ अफिसरकाे च’ड्कन, कारण यस्ताे रहेछ, भिडियोमा हेर्नुहोस !
१२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको ब, ला’त्का’र गर्नेसँग पाँच सय लिएर घटना गाउँमै मिलाउने यिनैै हुन् ‘बाबाजी’